Ahoana ny fanovana ny fikirana BIOS handefasana Linux amin'ny Live CD / USB | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fanovana ny fikirana BIOS handefasana Linux amin'ny Live CD / USB
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | FampiasanaLLL's UseLinux, soso-kevitra
Iray amin'ireo dingana lehibe tokony hatao interpose eo anelanelan'ny mpampiasa tsy dia manana traikefa ary ny fampiasana ny rafi-piasana hafa dia matetika ny fikirana BIOS. Paso tsotra nefa mitsikera y ilaina for manandrana e instalar misy fizarana Linux.
1 Fanamarihana ankapobeny
2 Ahoana ny fomba hidiranao ny efijery fananganana BIOS
3 Amboary ny boaty boot
4 BIOS taloha
5 UEFI sy Secure Boot
Raha vantany vao noforonina ny live-cd na live-usb an'ny distro tianao indrindra, dia mitoetra ihany ny manamboatra ny BIOS mba hivoahan'ny boot system avy amin'ny kapila mifanentana aminy.
Ho fanazavàna fohy dia andao lazaina fa rehefa manomboka solosaina dia ny entana voalohany dia ny BIOS (Basic Input / Output System), izay tena tanjony dia ny fanatanterahana ny fomba fanao izay manamarina ny fiasan'ny fitaovana ary avy eo dia mampakatra ny fandidiana. rafitra. Raha atao teny hafa, dia ilay efijery hitanao alohan'ny hanombohan'ny rafitra fandefasana entana (Windows io na hafa).
Ny tsy maintsy ataontsika mba hitsapana sy / na hametrahana Linux dia ny fidirana amin'ny efijery fikirakirana BIOS ary lazao aminy fa tsy manomboka ny rafitra fiasa izay napetraka ao amin'ny kapila mafy, atombohy ilay ao amin'ny live-cd na live-usb-tsika. , araka ny tranga misy.
Ahoana ny fomba hidiranao ny efijery fananganana BIOS
Mampalahelo fa tsy misy fomba iraisan'ny rehetra hanatanterahana an'io asa io satria ny maodelin'ny motherboard tsirairay avy dia misy BIOS manokana ary tsy ho azo atao ny manoratra antontan-taratasy momba ireo mpitantana fikirakirana. Na izany aza, raha avelantsika ho entin'ny intuition isika, dia tsotra ny fomba.
Mba hanaovana izany, rehefa mampifandray ireo fitaovana ianao ary raha vantany vao manomboka miseho ireo hafatra voalohany dia azonao atao ny manindry ny bokotra «Fiatoana» hampiatoana ny fizotran'ny boot ary hahitanao izay hita eo amin'ny efijery mora foana. Tsy maintsy atao haingana io satria segondra vitsy monja ireo hafatra voalaza ireo.
Raha tsy afaka manakana ny fizotran'ny fanombohana ianao dia jereo fotsiny ny efijery voalohany. Eo amin'ny farany ambany amin'ity efijery ity dia misy tsipika mitovy amin'io matetika: «Tsindrio F2 hiditra SETUP». Mazava ho azy, ny lakile mety ho hafa. Ny tena mahazatra dia: [DEL] na [Del], [Insert], [Esc], [F2], [F1], [F10] na ny lakilen'ny fiasa hafa.
BIOSes vaovao sasany koa dia mamela anao hisafidy ny fitaovana boot amin'ny alàlan'ny lakile hafa, nefa tsy miditra amin'ny pejy fananganana BIOS. Izany dia satria mahazatra matetika ny manova ireo toe-javatra ireo ary satria manakana ny mpampiasa tsy hanao fanovana hafa tsy nahy izany. Raha manana an'ity "hitsin-dàlana" ity ny BIOS dia ampiasao fotsiny ny zana-tsipìka fitendry ary safidio ny fitaovana boot mifandraika amin'izany.
Ity "hitsin-dàlana" ity dia miasa 1 ihany; amin'ny manaraka dia hamindra ny rafitra fikirakirana napetraka ao amin'ny kapila mafy. Noho izany, averina indray ny laoniny, hanaovana ilay fanovana "maharitra", na raha toa ka tsy manana ny "hitsin-dàlana" voalaza etsy ambony ny BIOS, dia tsy maintsy apetaho ny lakileny mifanaraka aminy hiditra amin'ny efijery fikirakirana BIOS, izay mety misy lafiny hafa tanteraka amin'ilay iray aseho eto, fa misy toetra sy tombontsoa mitovy amin'izany.
Amboary ny boaty boot
Eto no ahafahantsika manome torolàlana ankapobeny ihany, satria ny efijery fananganana BIOS dia miovaova arakaraka ny birao. Na izany aza, amin'ny ankapobeny, tsy maintsy mahita takelaka mitovy amin'ny «Boot» ianao na fidirana antsoina hoe «Boot urutan» na «Boot priorité» ao anatin'ny tabilao «ankapobeny» kokoa amin'ny fomban'ny «Fomba fiasa Advanced BIOS».
Amin'ity fotoana ity dia zava-dehibe ny mahatadidy fa eto no misy ny filaharana boot Midika izany fa hametraka andiana laharam-pahamehana isika: voalohany, manandrana manangona amin'ny cd na usb (miankina amin'ny fomba tiantsika hitsapana ny distro); raha tsy mahomby izany dia manandrana mipoaka avy amin'ny rafitra fiasa napetraka ao amin'ny kapila mafy, sns.
Ny fomba hisafidianana ireo takelaka na hanovana ireo fanovana dia miovaova be. Indraindray dia resaka fampiasana zana-tsipìka fotsiny, amin'ny fotoana hafa dia mila mampiasa ny PgUp sy PgDn lakile ianao, sns. Na izany aza, eo amin'ny tsanganana eo ankavanana dia hahita latabatra manazava foana ianao izay manondro ireo dingana tokony harahina. Eo amin'ny farany ambany, ho an'ny anjarany, dia miseho ny fanalahidy hanindriana hanao ireo asa mahazatra indrindra. Ny fahalalana tsy manam-paharoa amin'ny Anglisy dia ampy hahafantarana izay tokony hatao.
Farany fa tsy farany, tehirizo ny fanovana anao ary mivoaha amin'ny programa fanomanana. Mba hanaovana izany dia mila tsindrio ny lakile mifanentana aminy (raha ilay pikantsary teo aloha, F10).
Ny BIOS sasany efa zokinjokiny dia tsy tonga miaraka amin'ny fanohanan'ny boot amin'ny USB drive. Amin'izay dia ny safidy tsara indrindra dia ny fampiasana live-CD hanandramana ny distro Linux tianao. Na izany aza, azo atao ihany koa ny manery ny boot amin'ny USB (raha tsy misy ny fanohanana BIOS mifanaraka amin'izany) mampiasa PLOP Boot Manager.
Ny iray hafa, BIOSes taloha dia tsy misy akory manohana ny booty avy amin'ny kapila CD-ROM. Amin'izay, ny safidy voajanahary dia ny fampiasana floppies boot, izay vitsivitsy monja Distros mini Linux misy. Soa ihany fa raha manana mpamaky CD ilay masinina dia azo atao ny mi-boot amin'ny live-cd na dia tsy manohana azy aza ny BIOS, mampiasa Smart Boot Manager o PLOP Boot Manager.
UEFI sy Secure Boot
Ity fizarana ity dia tsy misy ifandraisany afa-tsy amin'ireo solosaina vaovao misy ny UEFI napetraka fa tsy ny BIOS "lany daty" ankehitriny. Ho fanamarihana, azo inoana fa izay rehetra miaraka amin'ny Windows 8 na avo kokoa dia manana UEFI sy Secure Boot azo alefa, satria ity dia nitaky avy amin'i Microsoft mba hanamarinana ny fitaovana.
Ny Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) dia famaritana iray izay mitady hisolo ny interface BIOS taloha, izay ho an'ny maro dia "valopolo" loatra ary misy lafiny mitovy amin'ilay DOS taloha. Ankoatr'izay dia mampiditra endri-javatra fanampiny maromaro izy io, izay tsy tanjon'ity lahatsoratra ity, izay miavaka ilay antsoina hoe "boot azo antoka" na "boot azo antoka".
Secure Boot dia manakana ny solosaina tsy hanomboka ny rafitra fiasa raha toa ka tsy manana taratasy fanamarinana nomerika ny boot loader, ny vokatra fanovana tsy ara-dalàna ny kaody manimba. Amin'izany fomba izany, ny malware misy karazana bootkit dia tsy ho afaka hiasa tsara.
Saingy, ny zava-misy izay naneren'ny Microsoft ireo mpanamboatra hizara ny solosain'izy ireo amin'ity safidy ity dia nahafahana nahazo mari-pahaizana Windows 8 korontana. Manokana, manahy izy fa ity endri-javatra ity dia tanjona fotsiny hanakanana ireo mpampiasa tsy hanangana rafitra fiasa hafa ankoatran'ny Windows. Amin'ity tranga ity, ny fepetra takiana dia fameperana bebe kokoa ho an'ny mpampiasa fa tsy endrika fiarovana.
Raha ny filazan'i Microsoft dia misy "antoka" roa izay tsy hitrangan'izany. Amin'ny lafiny iray, ny UEFI (amin'ny alàlan'ny baoty mampiasa "mode mifanaraka amin'ny BIOS", fantatra amin'ny anarana hoe "Legacy Boot") sy Secure Boot dia azo kilemaina. Etsy ankilany, ny fahazoan-dàlana takin'ny Secure Boot ho an'ny sonia nomerika dia avoakan'ny manam-pahefana tsy miankina, izay tsy mpanamboatra na Microsoft.
Ny marina dia mizara fotsiny ny fizarana Linux amin'izao fotoana izao Dingana voalohany afaka mihazakazaka amin'ny masinina miaraka amina UEFI sy Secure Boot.
Amin'ny raharaham-pirenena ankehitriny, tsara kokoa ny manafoanana ny Secure Boot alohan'ny hametrahana Linux. Ny fanohanana ny UEFI kosa dia mandroso kokoa, na dia mbola misy lesoka ihany aza. Raha sendra lesoka dia tsy hisy safidy hafa afa-tsy ny mifidy ny "Legacy Boot" ary alefaso ny UEFI.
Ny fametrahana indroa-boot an'ny Linux miaraka amin'ny Windows 8, izay mitaky ny fampiasana ny UEFI sy Secure Boot, dia tsy soso-kevitra amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao dia azo atao ihany - tsy misy aretin'andoha - amin'ny fampiasana ny kinova farany amin'ny fizarana malaza indrindra - vakio ny Ubuntu 12.10, Fedora 18, sns. mandroso
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ahoana ny fanovana ny fikirana BIOS handefasana Linux amin'ny Live CD / USB
Misaotra betsaka amin'ny tutorial, feno tanteraka. Betsaka no hahita soa.
Fanamarihana iray, hijerena raha misy olona mahalala zavatra betsaka ampirisihina ary manao lesona momba ireo safidy mahazatra indrindra izay azontsika hitadiavana amin'ny biolo, ary inona no ilain'ny tsirairay amin'izy ireo.
suuus dia hoy izy:
Izaho dia iray amin'ireo mety aminao. Manatevin-daharana ny baiko aho !!!
Mamaly an'i suuus
cesarbogotano23 dia hoy izy:
fandraisana anjara tsara tokoa izany fanampiana lehibe izany
Mamaly an'i cesarbogotano23
ary raha imac ahoana ny fandaminana azy hanombohana amin'ny cd?
Ny marina dia tsy manana hevitra aho fa heveriko fa mamela anao hiditra ao amin'ny biôsy koa izy ary hanova izany, sa tsy izany?
Nebokadnezara dia hoy izy:
Valiny tamin'i Nebokadnezara
Tsy sahy manamboatra cd live linux amin'ny Windows 8 pc aho
Tsy hitako izay hatao, mba ampio aho 🙁
Mariho fa ny torolalana amin'ny antsipiriany momba ny fomba fanaovana azy dia omena ao amin'ilay lahatsoratra.
Raha vantany vao voalamina ny BIOS (araka ny nohazavaina tao amin'ny lahatsoratra) dia mila mandika ny distro linux amin'ny pendrive fotsiny ianao (mampiasa unetbootin na mitovy aminy) ary alao ny masinina miaraka amina pendrive eo amin'ny toerany.
horadio dia hoy izy:
"Fanazavana" tsy misy ilana azy loatra - toa te hampiseho amin'ny tenany "ny haben'ny fantany" izy ary kely fotsiny ny fampahalalana sy ny antsipiriany hanombohana cd mivantana, araka ny nampanantenainy sy liana hianatra ... hanohy hitady tranonkala izahay mora azo kokoa ho an'ny mpampiasa iraisana ..
Mamaly an'i horadio
Inona no tsy hitanao araka ny hevitrao? Mety ho voafaritra kely kokoa ve ianao?
Ity dia lohahevitra iray izay azo raisina amin'ny fomba ankapobeny ihany satria samy hafa ny BIOS tsirairay.
Guku dia hoy izy:
Miarahaba, feno fankasitrahana noho ny fandraisana anjara, maika fa maika ahy ny nametraka Win sy Canaima, satria tsy maintsy miasa miaraka amin'ireo rindranasa izay mbola tsy mijanona ho any Canaima aho, ny pitsopitsony dia rehefa manandrana miditra ao amin'ny installer Win aho, ny Canaima dia miverina indray, nilazana aho fa tsy maintsy manova safidy amin'ny bios, fanaraha-maso SATA ... saingy tsy hita izany! Inona no azoko atao ??
Valiny tamin'i Guku
Mitady fampahalalana momba ny CD mivantana ao amin'ny GNU / Linux Nahita fampahalalana hitako izay tena mahaliana ahy hamafana ny fisalasalana (indrindra ho an'ireo vao teraka toa ahy). Ao amin'ny rohy manaraka ity:
Misaotra betsaka tamin'ity lahatsoratra ity.
Nona dia hoy izy:
Salama e! Misaotra betsaka anao tamin'ny fampahalalana, hitako fa tena feno sy azo io. ….
Mandrapihaona indray mifampiarahaba!
Valiny tamin'i Nona
CentOS7 dia hoy izy:
Misaotra betsaka! Niara-niasa tamin'ny Legacy Bios aho ary nanala ny UEFI. Fahamarinana amin'ny CentOS7.
Valiny amin'ny CentOS7
chaqui dia hoy izy:
Nisy olona efa nametraka Linux tao amin'ny dell inspiron niaraka tamin'ny Bios A05
Mamaly an'i chaqui
Fanontaniana iray, hametrahana linux amin'ny kapila, avy amin'ny usb, mila manova ny boot disk ianao (ny usb fa tsy ny kapila mangidy) avy amin'ny bios na amin'ny tranga misy ahy avy amin'ny UEFI dia efa nataoko daholo ny fanovana rehetra ilaina ary napetraka linux ny Safe UEFI izay nalamina mba hahatonga ny boot disk ho usb na hovaina ho boot miaraka amin'ny kapila mafy, satria nahazo Win 8 napetraka ihany koa avy amin'ny orinasa aho, ary ny UEFI ihany no azoko miditra amin'ny windows ary manao ny fanovana rehetra , koa, tsy fantatro izany linux iso (ilay hapetrako dia ubuntu 16.4.1) dia hiaraka amin'ny multi-starter, hisafidy na hanomboka varavarankely na ubuntu
Enrique Romero dia hoy izy:
Jereo… manandrana mametraka windows 7 avy amin'ny usb amin'ny solosaina finday miaraka amin'ny UEFI aho. Midira azy aho ary manamboatra ny fitaovana booty ankoatra ny fampandehanana ny UEFI Boot ary manome ny boot an'ny Legacy. Mahafantatra tanteraka ny fahatsiarovana usb izay misy ny rafitra fiasa nefa tsy mivoaka avy eo aminy amin'ny fotoana rehetra. Ao amin'ny varavarankely safidy boot dia misafidy ny fahatsiarovana aho ary mijanona mandritra ny fotoana fohy miaraka amin'ny efijery mainty ary miverina ny laptop ary tsy afaka nanomboka ny programa fametrahana aho ... Nanandrana fizarana Linux ihany koa aho, izay tsy azoko nolazaina hoe saingy amin'ny anarana dia afaka mahita zavatra toa an'i Debia sy 4.1 izay efa nampiasako teo aloha aho ary nametraka tsy nisy olana tamin'ny solosaina hafa. ny zava-misy dia ao amin'ity maodelin'ny solosaina finday ity izay efa hitako maromaro dia tsy avelako hanomboka amin'ny cd novahako tamin'ny alàlan'ny fametrahana ny rafitra fandidiana amin'ny iray hafa mitovy amin'izany ary ny fampitana ny kapila mankany amin'ilay tany am-boalohany fa tiako ny fantaro raha misy fomba hamahana ity olana kely eto amiko ity ... raha misy mahay mamaha an'io ary mandray ny olana amin'ny famakiana ny hevitro dia tena tiako izany
Ny "Bios" dia milaza etsy ambony Phoenix securecore
Valiny tamin'i Enrique Romero
Salama, nividy toshiba satllite NB10t-AF tamin'ny windows 8. Tapitra ny fiantohana ary nanandrana nametraka ubuntu aho. Tsy azo atao. Nesoriko ilay zavatra azo antoka boot ... Nametraka ubuntu tamin'ny penina aho miaraka amin'ireo fizara izay tadiaviko .. Vokany. rehefa vita ny fametrahana azy dia avereno tsara, miasa ny ubuntu. Novonoiko. Mandrehitra afo aho ary tsy mandeha intsony.
manamarina ny fisian'ny haino aman-jery- ...
tsy misy ny fisian'ny media ...
(ary avy eo) avereno indray ary safidio ny fitaovana boot mety na ampidiro haino aman-jery boot amin'ny fitaovana boot voafantina ary kitiho ny lakile
ary tsy azo atao ny miala ao.
raha manaiky ny penina izy dia azoko atao ny mampiasa ny système d'exploitation avy amin'ny pen, saingy toy ny hoe tsy fantany izany amin'ny kapila mangirana. misy hevitra?
Samir dia hoy izy:
Misy olona afaka manampy ahy ve aho manandrana mametraka linux canaima amin'ny pc misy Win 7 ary rehefa mametraka canaima dia miseho «manomboka canaima» ary omeko eo ary aorian'ny segondra vitsy dia manomboka indray ny pc? vahaolana vitsivitsy azafady….
Mamaly an'i samir
Ubuntu dia mety ho Rolling Release eo anelanelan'ny kinova LTS
Fanapahana ny "The GLMatrix"